Naannolleen [states] Ameerikaa 17 perezidaant Baarak Obaamaa irratti himannaa dhiheessan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Naannolleen Ameerikaa 17 perezidaant Baarak Obaamaa irratti himannaa dhiheessan
Naannoleen 17 [states] biyya Ameerikaa perezidaantii biyyattii Baaraak Obaama irratti himannaa kan dhiheessan tankaarfii bulchiinsaa Obaamaan immaammata goodaansaa [immigration] biyyatti irratti fudhate, as dhihoo kana labsame, hordofeeti. Himannaan kuni Obaamaa irratti kan dhihaate naannoo Teeksaasitti abbaa alangaa naannoo saniitiin. Ijoon dubbii himannaa kanaa Obaamaan daangaa seera biyyattii ce’eera kan jedhuudha. Obaamaan seera manni maree biyyattii baase cabsuudhaanseera haarawa baasuudhaaf yaaleera, akka himannaa kanaatti. Akka mormitoota imaammata haarawa Obaamaa labseetti, perezidaantichi biyyattii imaammata haarawa godaansaa kana labsuuf angoo hinqabu. Himattoonni himannaan kuni waa’ee dhimma godaansaa [immigaration] osoo hintaane waa’ee ol’aantummaa seeraa kabajsiisuuti, angoo peresidaantii daangessuu fi heera biyyattii tiksuuf ta’uu isaati kan mul’isuf yaalaan.
Deeggartoonni Obaamaa fi imaammata isaa tankaarfiin perezidaantichi fudhate seera qabeessa ta’uu isaa afaan guuttatanii dubbatu. Tankaarifiin akkanaa waan Obaamaa eegale osoo hintaane wontuma baratameedha- kana duras perezidaantonni biyyattii tankaarfii bulchiinsaa inuma fudhatu ture. Tankaarfiin Obaamaan fudhate bifa kamiinuu dangaa seera fi angoo isaa kan hincabsine ta’uu isaati dubbi himaan Masaraa Adii [White House] kan dubbate.
Naannoleen himannaa Obaamaa irratti banan Teeksaas, Alabaamaa, Joorjiyaa, aydaahoo, indiyaanaa, Kansas, Lowiiziyaanaa, Maaynee, Misisippii, Montaanaa, nebraaskaa, Kaarolaayinaa Kaabaa, Karolaayinaa Kibbaa, Daakotaa Kibbaa, Yutaah, Varjiiniyaa Dhihaa fi Wiskoonsiin dha. Nannoleen kunniin ‘Naannolee Diddiimoo’ [red states] paartii Rippabilikaan filachuun beekamniidha.
Akka immammata bulchiinsa Obaamaatti namoonni yeroo dheeraadhaaf Ameerikaa seeraan ala seenanii seeraan ala jiraataa turan araarama [amnesty] argachuun jireenya sera qabeessa eegaluu danda’u. Imaammanni haarofni kuni namoota miliyoona heddutti lakkawamaniif kan araarama laatuu jedhameeti kan abdatame. Worri imaammanni araaramaa kuni isaan dallansiise Obaamaa afoo akka dhaabbataniidha kan ibsaa turan, garuu. Himannaan kunis qaamuma yaalii saniiti. Himannaan kuni Rippabilikaanotaan kan dhihaate imaammata danquu fi qabxii siyaasaa galmeessisuu bira kan ce’ee faaydaa biraa qabaachuu hedduun nishakku.
Previous articleDaldalli meeshaalee qulqullina hinqabnee Itoophiyaa keessatti rakkoo guddaa ta’eera
Next articleDhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan